Apple inotaura nezve remangwana reApple Watch tambo | IPhone nhau
Apple inotaura nezveramangwana reApple Watch mabhendi
Mubvunzurudzo itsva, vatungamiri vaviri veApple vakakwanisa kutaura iyo yakasiyana-siyana uye mikana iyo Apple Watch ine tambo, magadzirirwo ayo uye zvose zviri shure kwavo.
Evans Hankey, Mutevedzeri weMutungamiriri weIndasitiri Dhizaini kuApple naStan Ng, Mutevedzeri weMutungamiriri weChigadzirwa Kushambadzira, vakatsinhira naHypebeast paApple Watch tambo. Kana iwe uri vashandisi veApple Watch, iwe unozoziva huwandu hwakasiyana hwemhando, zvigadzirwa uye mavara atinofanira kugadzirisa mudziyo wedu nenzira inokurumidza, tichigadzirisa kune imwe neimwe chiitiko, ichiva chimwe chezvishongedzo zvinoiswa mari yakawanda mu. chigadzirwa cheManzana.
Pamusoro pekugona kushandura dials, chimiro chetambo yako uye ruvara rwayo, kunyangwe ruvara uye zvinhu zveApple Watch pachayo, Hankey anodaro. vashandisi vane "nhamba inoshamisa yemusanganiswa unogoneka" kutsanangura maitiro avo nguva imwe neimwe.
Imwe yezvirevo zvinoratidzira Apple Watch mune iyi nyaya, ndeyekuti tambo dzinotishandira kubva kumuenzaniso kuenda kune modhi, kubva kune rimwe gore kuenda kune rimwe, chero tichichengeta saizi yewachi yedu. Semuenzaniso, neiyo itsva Apple Watch Series 7, Apple yakawedzera saizi yewachi kusvika 41 uye 45mm, asi mabhendi ari pamakumi mana ne40mm modhi anoenderana neawo ekuwedzera.
Hankey aida kusimbisa izvozvo Kuchengeta iyi "kumashure kuenderana" pakati pemabhendi ekare uye mhando nyowani ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zveApple Watch timu. Chimwe chinhu icho, pachedu, chinotisimbisa zvikuru. Kuziva kuti mari yatichaisa mumabhandi mune chero modhi ichatibatsira, hapana mubvunzo kuti inokurudzira kuramba tichidaro.
Kubva kune yekutanga Apple Watch kusvika kune yazvino Series 7, kuchinjana kwave kuri kwekona yechigadzirwa. Kubva pamaitiro uye ruvara rwetambo, iyo yewachi kesi zvinhu uye yewachi chiso chawakasarudza uye chawakagadziridza, Apple Watch inopa inoshamisa nhamba yezvingangoita musanganiswa, uverenge muzviuru. Pese patakakwenenzvera dhizaini yeApple Watch, takaedza kuchengetedza kuenderana nemamodheru apfuura, kunyangwe kuratidzwa kwakakura nekufamba kwemakore.
Kwatiri, tambo yacho haisi nyaya yetekinoroji chete: tambo imwe neimwe inoratidza rudo rwedu rwezvinhu, hunyanzvi uye maitiro ekugadzira.
Kunyangwe zvese zvave nerunyerekupe uye zvakakwanisa kubuda pamatendi, Apple Watch tambo haisanganisi chero tekinoroji, asi dhizaini yavo inoita basa rakakosha maererano nevabvunzurudzwa kuti vaone kuti kushanda kweApple Watch hakukanganiswe. Ng ataura kuti Apple Watch tambo inoratidzira "magadzirirwo" kuti ave nechokwadi chekuti akasununguka uye haaparadze ruzivo rweApple Watch.
Zviripachena kuti Apple Watch tambo ibhizinesi rakatenderedza reApple uye iro isu tinokwezvwa kwazvo sevashandisi. Isu takazorodzwa chaizvo kuziva kuti, zvinoita sekunge, tichakwanisa kuenderera mberi nekushandisa tambo dzedu mune ramangwana modhi yeCupertino wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotaura nezveramangwana reApple Watch mabhendi
Ese nhau kubva kuApple ye2022 maererano naGurman
Aya anga ari anonyanya kufarirwa Emojis a2021